Ny tena fitiavan'i Kristy - Mana isan andro
Ny tena fitiavan’i Kristy? (somary lavalava dia vakio tsara fa aza asosa fotsiny mba hitondra soa ho anao) 😉
– Ny tena Fitiavan’Andriamanitra tsy hoe:
Fitahiana mitobaka, na fiakaram-piainana, na fahazoana zavatra materialy marobe, na fahafahana fanadinana, na fahazoana asa tsara.
Fananana zanaka hendry, na vady hendry, na tokantrano milamina, na fidiram-bola mandeha tsara, na koa fifaliana sy fiadanana.
– Ny tena Fitiavan’Andriamanitra tsy hoe akory aza:
Fahasalamana, hery sy tanjaka, trano hialofana, akanjo tafiana, sakafo tsara sy mahavelona.
Eny na ny fahavelomantsika aza, tsy mbola izany no atao hoe: tena Fitiavan’Andriamanitra.
– Ny tena FITIAVAN’ANDRIAMANITRA?
« Nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho very AHO raha mino Azy fa hanana ny fiainana m/zay » Jaona 3.16
Ireo rehetra voatanisa ambony ireo dia ny hoe: « Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zvtr rehetra? » Romana 8.32.
Fanampiny fotsiny ireo fa tsy ireo ilay fanehoam-pitiavana
Ny mampalahelo d tsy voaraitsika mihitsy io fitiavana natolony io. Ireo zvtr lazaina fa fanampiny ireo no tena mahafaly antsika sy mahatery antsika, ary hiadiantsika mafy Aminy.
Maivana be ilay fifaliana hateraky ny hoe: « VOAVELA HELOKA anie aho », noho ny hoe: afaka fanadinana, na nahazo promotion…
Maivana be ilay fifaliana hateraky ny hoe: « VOASORATRA ANY AN-DANITRA anie ny anarako », raha ampihoarina @ hoe: sitrana ny aretiko na afaka ny trosako.
Marary be ilay tsy fahampiana sy ny tsy fananana an’itsy na iroa, mavesatra loatra ny problème ka tsy voafafan’ny vaovao iray milaza ny hoe: « ZANAK’ANDRIAMANITRA anie aho ».
Tsy voaraintsika havako ilay fitiavan’Andriamanitra, izany no mahatonga ny fifaliantsika sy ny fiadanantsika miankina be @olona na zavatra hita maso.
– Miezaka be ny mpitarika hanafàna ny olona sy hampahery ny olona hivavaka. Tadiavina daholo ty fomba rehetra ity hampahazotoana azy satria mivavaka ny olona nefa tsy naharay ‘ilay tena fitiavana akory.
– Tsy mety tanteratsika ny sitrapon’Andriamanitra na dia fantatsika foana aza satria tsy voaraitsika ilay tena Fitiavana.
– Tambazana @Teny fikasàna maro isika vao manome ho an’Andriamanitra, na vao hankatoa tenin’Andriamanitra satria tsy voaraitsika ilay TENA FITIAVANA.
MAINA ny tontolon’ny fivavahana: fanambatambazana sy fampitahorana ary routine no tena manjaka ao satria tsy voaraitsika ilay tena Fitiavan’Andriamanitra. 🙁
Tianao hiova ny fiainanao? Lazao @Tompo isan’andro, isan’ora: « Ataovy tsapako ny fitiavanao ahy ».
Saintsaino isan’ora, isan’andro fa TIANY LOATRA ianao, averiko: TIANY LOATRA ianao, ary nafoy Ilay tsara indrindra tao an-danitra mba ho VOAVELA HELOKA ianao, mba ho lasa ZANAK’ANDRIAMANITRA, ary mba ho VOASORATRA ANY AN-DANITRA ny anaranao.
Waouhhh! QUELLE NOUVELLE 😍😍
Manana Fiainana ve?
Izay MANANA ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy...